Xeebta Soomaaliyeed (1960) - Wikipedia
Xeebta Soomaaliyeed (1960)
Dawladii Somaliland ee 1960 (Af-Ingiriis: State of Somaliland) waxay ahayd dawlad da' yar oo jirtay 5 maalmood. Waxayna xuriyada ka qaadaday boqortooyadii Ingiriiska taariikhdu markay ahayd 1960, 26 Juun. Shan maalmood ka dib waxay la midawday Mustamaradii Talyaaniga. Laakiin nasiib daro midawgaasi muu shaqayn sabo badan awgeed. Maantana waxay tahay Jamhuuriyada Somaliland. 1991, 18 May Waxay ka noqotay midawgii hungoobay ee 1960 1dii Juulaay. Ilaa hada wax aqoonsi ah kamay helin beesha caalamka, inkasta oo ay caalamku ogyihiin inaanay shaqo isku lahayn Dawlada Fadaraalka Soomaaliya.
Dawladii Xeebta Soomaaliyeed(1960)
State of Somali Coast
Raysal WasaareMaxamed Xaaji Ibraahim Cigaal
- Raacday Koonfur
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xeebta_Soomaaliyeed_(1960)&oldid=197585"
Last edited on 8 Diseembar 2019, at 01:42